ဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်းဘရိတ်ပေးသွင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူများကတရုတ် - အရည်အသွေးမြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်း - Parfit
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > စာနယ်ဇင်းဘရိတ် > ဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်းဘရိတ်
အောက်ပါ Hydraulic စာနယ်ဇင်းဘရိတ်အကြောင်းကို related သည်သင်တို့ကိုငါပိုကောင်း Hydraulic စာနယ်ဇင်းဘရိတ်ကိုနားလည်ကူညီရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။
အကြိုစက္ကန့်ဘရိတ်ကိုလည်းစက်ပစ္စည်းအတုလုပ်တဲ့များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ပေးသောစက်ကွေးဟုခေါ်တွင်သည်အဓိက function ကိုသတ္တုအပြောင်းအလဲနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ကျယ်ပြန့်အလင်းစက်မှုလုပ်ငန်း, လေသင်္ဘောသတ္တု, တူရိယာ, လျှပ်စစ်, သံမဏိ, သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အလှဆင် industry.The စာနယ်ဇင်းဘရိတ်အတွက်အသုံးပြုသည်, မှိုအမျိုးမျိုးနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားတဲ့အသုံးပြုပုံစာရွက်ကြီးမားသောစာရွက်သတ္တုအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်လက်သီးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည် သတ္တုဒါအပေါ်ဖိအားပတ်ပတ်လည်လာကြတယ် extruding အစွန်းကွေးနှင့်နိုင်ပါတယ်။
အောက်သို့ slider ကိုထလှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားနှင့်လှုပ်ရှားမှုချ type.The လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားလှုပ်ရှားမှုကိုတက်ဖြစ်, ဒီစက်၏ worktable ပေါ်တက် worktable နှင့် workpieces ပုံသေဖြစ်ပါသည်: လှုပ်ရှားမှုပုံစံနှင့်အညီအဆိုပါဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်းဘရိတ်သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
1. အလုံအလောက်အစှမျးသတ်တိနှငျ့ကျောမှုနှင့်အတူအားလုံးသံမဏိ welded ဖွဲ့စည်းပုံမှာ်ပေးရန်နှင့်တုန်ခါမှုသို့မဟုတ် annealing မီးဖိုထဲအိုမင်းခြင်းဖြင့်ပြည်တွင်းရေးစိတ်ဖိစီးမှုပပျောက်။
ဒါဟာကြီးမားတဲ့ workpieces ကို process မှနှစ်စုံမှတဆင့်နားမှာခြမ်းနေရာချနိုင်ပါတယ်ဒါ 2. အဆိုပါ wallboard တစ်ဦးက C-shaped ဖွဲ့စည်းပုံမှာချမှတ်။
တိုက်ရိုက် drive ကိုအလုပ်လျှော, စက်ဆလင်ဒါနှင့် slider ကိုချိတ်ဆက်မှုနှစ်ခုလုံးကြီးစွန်းမှာ installed, ဂီယာတက် 3.Hydraulic
4.The လျှောလုပ်ကွက်ထပ်တူယန္တရားထပ်တူအတင်းနှင့်လျှောပိတ်ပင်တားဆီးမှုချောချောမွေ့မွေ့ရွှေ့လုပ် torsion ရိုးချမှတ်
5.The positioning ကိုမြင့်မားတဲ့ထပ် positioning ကိုတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူရေနံဆလင်ဒါအတွင်းစက်မှုပိတ်ပင်တားဆီးမှုဖွဲ့စည်းပုံမှာချမှတ်
6.Slide လေဖြတ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုရပ်တန့်အကွာအဝေးကိုလျင်မြန်စွာမော်တာ, လက်စွဲစာအုပ်ဒဏ်ငွေ-tuning တန်ပြန် display ကိုအားဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
7.The slider ကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်, မည်သည့်အနေအထားမှာရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်
8.The အထက်သေဆုံးအချိန်ပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်မှို shortens နှင့်ထုတ်လုပ်မှု efficiency.The အထက်သေဆုံးလက်စွဲအဆိုပါ workpieces တိကျစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်ရသောကြောင့်ချေပကိရိယာနှင့်သေဆုံးဘဝရှိပြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်သည့်အမြန် Clamp ကိရိယာရှိပါတယ်
ဝန်ကိုထေမိရန် 9.Slightly အားနည်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
hot Tags:: ဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်းဘရိတ်, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ, တရုတ်လုပ်, လက္ကား, စိတ်ကြိုက်ဝယ်, စျေးပေါ, လျှော့စျေးနိမ့်သောစျေးနှုန်း, လျှော့စျေးဝယ်အရည်အသွေးမြင့်မား, စတော့ရှယ်ယာထဲမှာအစုလိုက်အခမဲ့နမူနာ, စျေးနှုန်း, စျေးစာရင်းကိုကိုးကား, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, နောက်ဆုံးပေါ်, classy, ​​အဆင့်မြင့်, အကြမ်းခံ, နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်း
Torsional ဝင်ရိုး synchronous ဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်းဘရိတ်မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား Hydraulic စာနယ်ဇင်းဘရိတ်စက်Electro-ဟိုက်ဒရောလစ်ထပ်တူဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းစာနယ်ဇင်းဘရိတ်ဟိုက်ဒရောလစ်ပန်းကန်ကွေးစက်